निरोगी भएर धेरै वर्ष बाँच्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ नियम - Internet Khabar
Home tips निरोगी भएर धेरै वर्ष बाँच्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ नियम
एजेन्सी । निरोगी रहेर स्वस्थ जीवन जिउने चाहना सबैको हुन्छ । तर आधुनिक जीवनशैलीले गर्दा हाम्रो शरीरमा लाग्ने रोगहरु पनि बढिरहेका छन् । आधुनिक खानपानको शैलीले रोगसंग लड्ने हाम्रो क्षमतामा कमी ल्याइदिएका कारण हामी छिटो बिरामी परिरहेका छौं । तर सजग रहेर आफ्नो खानपानको शैलीमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने हामी अहिले पनि निरोगी बन्न सक्छौं । जसले गर्दा धेरै वर्षसम्म निरोगी भएर बाँच्न सकिन्छ।
खाना खाँदा सधै चपाएर खानुपर्छ । खाना राम्रोसंग चपाएर खाँदा हाम्रो पाचनशक्ति बढ्छ । यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा ग्यास्ट्रिक, एसिड, कब्जियत लगायतका पाचन प्रक्रियासंग सम्बन्धित रोगहरु हट्छन् । यसको साथै राम्रोसंग चपाएर खाँदा खानाको पोषणतत्व राम्रोसंग हाम्रो शरीरमा जान्छ र काम गर्छ ।
पानी प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ । तर खाना खानेसमयमा पानी पिउनु हुँदैन । यसले गर्दा पाचन प्रक्रियामा असर हुन्छ । खाना खानुभन्दा डेढ घण्टा अगाडी या डेढ घण्टा पछाडी मात्र पानी पिउनुपर्छ ।
हाम्रो स्वास्थ्या धेरैजसो हाम्रो खानपिनको शैलीसंग जोडिएको हुन्छ । राती खाना खानासाथ सुत्नु हुँदैन । खाना खानासाथ सुत्दा खाना राम्रोसंग पच्न सक्दैन। राती सुत्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडी खाना खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ ।
धेरैजसोको बानी खाना खानासाथ फलफूल खाने हुन्छ । तर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो बानी राम्रो मानिदैन । फलफूल खाने बानी भएमा खाना खाइसकेको कम्तिमा आधा घण्टा पछि मात्र खानुपर्छ । यदि खानाको मात्रा कम गर्नु छ भने खाना खानुभन्दा आधा या एक घण्टा अगाडी फलफुल खान सकिन्छ ।
खाना खाइसकेपछि चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन । चिसो खानेकुरामा चिसो आइसक्रिम, चिसो पानी पनि पर्छन् । यसो गर्दा पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ । जसले गर्दा कब्जियतको समस्या हुने सम्भावना बढ्छ ।
Previous articleकार्यक्रम सकेर फर्किँदै गर्दा चर्चित गायिका शान्ति श्रीको कार दुर्घटना
Next articleयी ७ राशिका लागि अति शुभ छ आजको दिन, हेर्नुहोस् बिहीबारको राशिफल